भारत पश्चिम बङ्गाल र रुसमा कम्युनिष्ट सकिएको उदाहरण दिंदै बाबुरामले भने नेपालमा पनि यस्तै होला विचार गर्नुस (भिडियो) ! || सुनौलो नेपाल
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई आफ्नो दम्भ त्यागेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् । शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदको बैठक सुरु हुनेवित्तिकै बोल्दै भट्टराईले सरकारले आफ्नो दम्भ प्रदर्शन गर्दै गएको र उक्त दम्भले सरकारलाई नै अप्ठेरोमा पर्ने बताए । उनले अहिले दुई तिहाइको बहुमत भएपनि सधैं रहन नसक्ने बताए ।
उनले भारतको पश्चिम बंगला रुस लगायत ठाउँमा दशकौं लोकप्रिय भएका पार्टीहरु बढारिएको प्रसंग कोट्याउँदै ओली सरकारलाई मताधिकारको सम्मान गर्न सुझाव दिए। उनले भने म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु दम्भ त्यागौं अरुको कुरा सुनौं।’ उनले अगाडि थपे ज्ञानले बोल्छ बुद्धि सुन्छ। त्यसैले यो सरकारले पनि यस्तै काम गरोस्।
यसैगरी उनले सरकारलाई विधेयक ल्याउँदा सोचेर मात्रै ल्याउन आग्रह गरे। उनले सरकारले ल्याएका विधेयकहरु विवादस्पद बन्दै गएकोप्रति लक्षित गर्दै उनले भने विधेयक बनाउँदा विचार गरियोस्, राज्य केन्द्रीकरण उन्मुख हुँदैछ। गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक विज्ञापन विधेयक लगायतका विवादस्पद विधेयक खारेज गर्न माग गर्दछु।यस्तै उनले सांसदलाई ल्यापटप दिएर मानमर्दन गर्न खोजिएको बताए। उनले भने सांसदलाई ल्यापटप दिनै हुन्न। यो विलासिताको साधन भएकोले सांसदले आफैं किन्नुपर्छ।
भट्टराईले सबैलाई निशुल्क स्वास्थ्योपचार पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। उनले सांसद नेता तथा पहुँचवालाहरु सामान्य टाउको दुख्दा पनि विदेश जाने चलन रोक्नुपर्ने बताए। उनले भने नेताहरु केही भए उपाचार गराउन विदेश जाने भएपछि जनतालाई पनि पनि हामीले किन नपाउने भन्ने लाग्न थालेको छ। यही निहुँमा हामीले कामधभेनु गाइ जस्तै दोहिरहेका छौं। यसलाई बन्द गर्नुपर्छ।सांसद तथा नेताहरुलाई स्वास्थ्यको लागि सरकारी ढुकुटीबाट खर्च नलिन आग्रह गरे। उनले नागरिकहरुमा नकाारत्मक प्रभाव पारेको बताए। उनले भने पहुँचवालाले करोडौं लिने। नसक्नेले उपचार नपाइ मर्नुपर्ने
शुक्र, असार ६, २०७६ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस